LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာတည်ဆောက်ခြင်း 75955 HogwartHamleys မှာ Express ကို
27 / 09 / 2018 27 / 09 / 2018 ဂရေဟမ် 1651 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်, နေပြည်တော်, တည်ဆောက်, ပန်းချီဆရာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဗီဒီယို, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ, YouTube ကို
Brick Fanatics ထိုင်နှင့်တည်ဆောက်ရန် Hamleys သို့သွားရောက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်
သက်တမ်းအသစ်အတွက်ကျောင်းသို့ပြန်လာခြင်းသည်ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်ဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်သူ၏ friends သူတို့ Hogw ပေါ်တက်သည့်အခါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုပါartပလက်ဖောင်း9¾မှာ Express ကို။ ထိုကဲ့သို့သောချစ်မြတ်နိုးသော Potter lore ၏အပိုင်းအစပြန်လာရာမှထွက်ခွာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ နောက်ကျောအုတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အနီရောင်ရထားနှင့်အတူဆောင်ပုဒ်။
Hamleys ၏အပေါ်ဆုံးထပ်တွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါသည် Lego အပိုင်း၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသောဒြပ်စင်များဖြင့် ၀ ယ်ရန် ၀ ယ်ယူရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အစုံ - သို့မဟုတ်အချို့သောအဆောက်အ ဦး လုပ်ပါ။ လန်ဒန်၏အကျော်ကြားဆုံးကစားစရာစတိုးဆိုင်နာမည်နှင့်အတူ ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန် မဖြစ်မနေ - ရှိသည် LEGO ခရစ္စမတ် 2018 အဘို့အဖြစ်လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းရှိတာက Brick Fanatics အယ်ဒီတာအယ်ဒီတာဂရေဟမ်ဟန့်ခ်ျကအကွက်ကိုဖွင့်ပြီးအတူတူထားလိုက်သည်။
အဆိုပါကြီးကြပ်မှူးများကဝိုင်းရံ Lego မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်ကျားကန် Lego အပိုင်းကဒီ wizarding အစုံအတူတူချပြီးခံရဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရထားကိုယ်နှိုက်အပြင် Platform 9¾နှင့်ချိုသောလှည်းတန်းအပိုင်းတို့ကိုတည်ဆောက်သည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် Hamleys တော်ဝင်အစောင့်တပ်ဖွဲ့ minifigure ။ st မှart, အင်ဂျင်အတူတကွကြွလာမီ, ပလက်ဖောင်း, တပ်ဆင်ထားပြီးနောက်, ရထား၏တပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံစံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ဝှက်ထားသောအုတ်နံရံဝင်ပေါက်၊ Daily Prophet သတင်းစာများနှင့် Wanted ပိုစတာတို့ပါဝင်သည်။ နှင့်အတူ ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ron Weasley, Hermione Granger, Remus Lupine, Trolley Witch နှင့် Dementor အသေးစားဓာတ်ပုံများပါဝင်သည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်.
Hamleys ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးသိုလှောင်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ minifigure စကေးနှင့် BrickHeadz အစုံ။
၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန် ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.lego.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO FORMA - နှင့်ပွင့်လင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု - အနာဂတ်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ဘယ်မှာလဲ။ →